XOG: Maxaa ka jira in Madaxweyne Gaas Lacag u Doontay Imaaraadka
HomegaasXOG: Maxaa ka jira in Madaxweyne Gaas Lacag u Doontay Imaaraadka
Madaxweynaha waqtigiisu dhamaanaayo ee Dawlad Goboleedka Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa dhowaan u baxay safar aan la shaacin ujeedooyinkiisa oo uu ku gaaray Magaalada Dubai ee xarunta Ganacsiga Dawlada Isutaga Imaaraatka Carabta .
Gaas oo shacabka Puntland ku eedeenayaan inuu ku hungoobay fulinta ballanqaadyadii uu balanqaaday markii la dooranayay oo uu ku fashilmay in uu Puntland gaarsiiyo meel sare shantii sano ee uu xafiiska joogay, ayaa hada doonaya inuu kursiga kusoo laabto si uu ula dagaalamo dowlada Fedraalka Soomaaliya ee uu madaxwaynaha ka yahay Maxamed C/laahi Farmaajo.
Madaxweyne Gaas ayaa markii uu ku dhawaaqay musharaxnimadiisa kadib wuxuu u duulay wadanka Imaarate-ka Carabta ,si uu uweydiisto lacago uu doorashada ku galo.
Dad xogogaal ah ayaa sheegay in Gaas uu diyaar u yahay inuu fuliyo qorshooyinka Emirate-ka ee Soomaaliya, hadii ay ka caawiyaan inuu markale kusoo laabto xafiiska.
raiisulwasaarihii hore ee Soomaaliya Mdane Cumar Cabdirashiid ayaa dhex dhexaadiye ka ahaa labada dhinac, isagoo doonaya inuu damiinto Gaas, hadii ay Carabtu ogolaato iney lacag bixiso.
lama garanaayo jawaabta ay imaaraatku siiyeen Madaxwayne Gaas maadaama dhowaan ay imaaraatku ka balan qaadeen Dowlada dhexe ee Soomaaliya iney joojin doonaan faragalinta qaawan, oo ay ku heyaan arimaha gudaha Soomaaliya.
Doorashada Puntland 2019 gaas